Faysal Cali Waraabe: Shanta Soomaali cad qura weeye, Ilaahay cadowgeeda ha jebiyo.. | shumis.net
Home » News » Faysal Cali Waraabe: Shanta Soomaali cad qura weeye, Ilaahay cadowgeeda ha jebiyo..
Faysal Cali Waraabe: Shanta Soomaali cad qura weeye, Ilaahay cadowgeeda ha jebiyo..
Gudoomiyaha Xisbiga Ucid, Faysal Cali Waraabe, ayaa waxaa uu Soomaalidu uu ugu baaqay inay la timaado caqli wanaagsan, ka dib markii uu sheegay inuu baaba’ay magacii Soomaalida.
Gudoomiyaha, ayaa yiri “Soomaalida waxaan leeyahay Shanta Soomaaliyeedba waa isu mid, isu cad baynu nahay, wixii Soomaali ka xuna, way naga xun yihiin, wixii NFD ka xun, way naga xun yihiin, wixii Jabuuti ka xun, way naga xun yihiin, kan Jigjiga ka xun, waa naga xun yahay, hal cad oo quraa isu nahay.”
Gudoomiyaha Xisbiga Ucid, ayaa markale yiri “Waxaa loo baahan yahay caqli la keeno, caqli fiican la keeno, magacii Soomaali wuu baaba’ay, waad aragtaan maanta dadkeenii. 22 kun oo ciidamo shisheeya ah, oo ujeedo kala jeeda leh ayaa maanta Soomaaliya joogta. Ilama aha inay nabad ka keenayan dadkaasi. Nabad waxaa ka keenaya dadka Soomaaliyeed.”
Faysal Cali Waraabe oo la hadlay Universaltv, ayaa yiri “Insha’Allaha, anaguna haddaan nahay reer Somaliland waxaan ciyaari doonnaa doorkayaga muqadaska ah, sidii dhulkaa nabad looga samayn lahaa. Waanu ka soo dhex geli doonnaa Insha’Allah.”
Waxaa uu intaa ku daray “Waxaan leeyahay Ilaahay (SWT) Soomaali madax fiican ha siiyo. Ilaahay uurkooda bur-cad ha isu mariyo. Ilaahay cadowgooda ha jebiyo.”
Title: Faysal Cali Waraabe: Shanta Soomaali cad qura weeye, Ilaahay cadowgeeda ha jebiyo..